Baro Khatarta Forex Trading | Shaacinta Khatarta FXCC
Home / About / 24 / 5 SUPPORT / Daah Risk
Macmiilku waa in uusan si toos ah ama si aan toos ahayn ugu maalgelin Qalabka Maaliyadeed haddii uu ogyahay oo uu fahamsan yahay halista ku lug leh mid kasta oo ka mid ah Qalabka Maaliyadeed. Marka, ka hor inta aan la codsan koonto, macmiilku waa inuu ka fekeraa in uu si taxadar leh u eego in maalgelin gaar ah oo ku yaala qalabka Maaliyadeed oo ku haboon isaga oo ku sugan nalalka xaaladdiisa iyo dhaqaalaha.
Macmiilku waxaa looga digayaa khatarta soo socota:
Shirkadu maaha mana balan qaadi karto maalgelinta bilawga miisaaniyadeed ee macaamilka ama qiimaheeda mar kasta ama lacag kasta oo lagu maalgeliyo qalab dhaqaale.
Macmiilku waa inuu qirayaa in, iyada oo aan loo eegin wax macluumaad ah oo laga yaabo inay Shirkaddu soo bandhigto, qiimaha maalgalin kasta ee Hantida Maaliyadeed ayaa hoos u dhigi kara ama kor u kacaya, waxayna xitaa dhici kartaa in maalgashadu noqon karto mid aan qiimo lahayn.
Macmiilku waa inuu qirayaa in uu khatar weyn u yahay in uu dhaco khasaaro iyo waxyeelo ka timid iibsashada iyo / ama iibinta qalab dhaqaale oo aqbalo in uu diyaar u yahay inuu qaato khatartaas.
Macluumaadka muujinta hore ee qalabka Maaliyadeed ma hubinayaan waxqabadka hadda iyo / ama mustaqbalka. Isticmaalka xogta taariikhiga ahi ma aha mid saameeya ama saadaalin ammaan leh marka loo eego waxqabadka mustaqbalka ee Aaladaha Maaliyadeed ee ay warbixintani sheegayso.
Macmiilku waxaa lagula talinayaa in macaamilada ay sameeyaan adeegga wax-qabadka ee shirkadda laga yaabo inay noqoto dabeecad isbaaro ah. Lacagaha waaweyn waxaa laga yaabaa inay dhacaan wakhti gaaban, oo isu dhigma wadarta maalgelinta ee Shirkadda.
Qalabka Qalabka Maaliyadeed waxaa laga yaabaa inaanay si dhaqso ah u noqonin dareeraha marka la eego dalabka hoos u dhaca iyo macmiilku waxaa laga yaabaa inaanay ku jirin meel lagu iibiyo ama si sahlan loo helo macluumaadka qiimaha qalabka Maaliyadeed ama heerka halista la-xiriira
Marka qalab lacageed lagu iibiyo lacag aan ka ahayn lacagta dalka macaamiishiisa, isbedel kasta oo sicirka sarrifka ah wuxuu yeelan karaa saameyn xun oo qiimo, qiimo iyo waxqabadka.
Aaladda Maaliyadeed ee Suuqyada Dibadda waxay keeni kartaa khataraha ka duwan halista caadiga ah ee Suuqyada ee Dalalka ku yaal Degaanka. Xaaladaha qaarkood, khatarahaasi waxay noqon karaan kuwo ka weyn. Saadaasha helitaanka faa'iidada ama khasaaraha ka yimaada suuqyada dibadda waxaa sidoo kale saameeya isbeddelka sicirka sarrifka.
Qalabka Maaliyadeed ee Wakiil (sida ikhtiyaari, mustaqbalka, soo gudbinta, isbeddelka, CFD, NDF) wuxuu noqon karaa macaamil ganacsi aan la keenin oo siinaya fursad uu ku kasbado isbedelka sicirka lacagta, badeecadaha, suuqyada saamiyada suuqa ama qiimaha la wadaago ee lagu magacaabo qalabka hoosta . Qiimaha Gawaarida Maaliyadeed ee Wicitaanku wuxuu si toos ah u saameeyaa qiimaha amniga ama qalab kale oo asaasi ah oo ah sheyga iibsiga.
Hantidhowrka / suuqa suuqyada waxay noqon kartaa mid aad u kacsan. Sicirada Qalabka Maaliyadda ee Wicitaanka, oo ay ku jiraan CFDs, iyo hantida aasaasiga ah iyo Indices ayaa laga yaabaa in ay si deg deg ah u socdaan iyo kala duwanaan waxayna ka tarjumi karaan dhacdooyinka aan la filayn ama isbedelka shuruudaha, midkoodna aan kantarooli karin Macmiilka ama Shirkadda.
Qiimaha CFD-yada ayaa saameyn ku yeelan doona, oo ka mid noqonaya waxyaabo kale, isbeddelka sahayda iyo baahida xiriirka, barnaamijyada dawladda, beeraha, ganacsiga iyo ganacsiga iyo siyaasadaha, dhacdooyinka siyaasadeed iyo dhaqaale qaran iyo kuwa caalamiga ah iyo astaamaha maskaxeed ee ka jira goobta suuqa.
Macaamiishu waa inuusan iibsanin Qalabka Maaliyadeed ee Wicitaanka haddii aanu dooneynin in uu fuliyo khatarta ka iman karta dhammaanba lacagta uu maalgashaday iyo sidoo kale guddiyo dheeraad ah iyo kharashyada kale ee la galay.
Xaalado gaar ah oo ka mid ah suuqyada waxaa laga yaabaa inay noqoto mid adag ama aan macquul aheyn in la sameeyo amar
Bixinta Lacagta Joojinta Khatarta waxay u adeegtaa si loo yareeyo khasaarahaaga. Si kastaba ha noqotee, shuruudaha suuqyada qaar ka mid ah fulinta Amarka Lahaanshaha Joojinta ayaa laga yaabaa inay ka sii xumaato qiimaha la qoondeeyey iyo khasaaraha la xaqiijiyay waxay ka badan kartaa laga filayo.
Haddii raasamaalka lacageed uusan ku filneyn in uu qabto xilalka hadda la furo, waxaa lagugu yeeri karaa inaad lacag dheeri ah bixiso ogeysiis gaaban ama yareyso soo-gaadhista. Ku guuldareysiga inaad sidaas yeelato wakhtiga loo baahan yahay waxay keeni kartaa in la jebiyo boosaska khasaarinta oo aad masuul ka tahay wixii khasaare ah ee keenay.
Baanka ama Bare-Bixiye kaas oo Shirkadda shirkaddu ka go'an tahay inay lahaan karto danaha liddi ku ah danahaaga.
Xadgudubka Shirkadda ama Baanka ama Baqshadeynta Shirkadda si ay u saamayso macaamilkiisa waxay keeni kartaa in shaqooyinkaaga la xiro oo ka soo horjeeda rabitaankaaga.
Dareenka macmiilka waxaa si cad loogu soo bandhigay lacagaha si aan caadi aheyn ama si aan caadi aheyn oo aan loo hubin karin in qiimaha la soo saari doono mar walba ama in ay adagtahay in la sameeyo macaamil qiimo ah oo laga yaabo in lagu soo xigto maqnaanshaha counter xisbi
Ganacsiga on-line, iyada oo aan loo eegin sida ay u habboon tahay ama waxtarkeeda, ma ahan khasab in yareynta khatarta la xiriira ganacsiga lacagta
Waxaa jira khatar ah in ganacsiyada macaamiisha ee Aaladaha Maaliyadeed ee laga yaabo inay noqdaan ama u noqdaan canshuur iyo / ama wixii kale ee shaqo tusaale ahaan isbeddelka sharciga ama xaaladiisa shakhsiyeed. Shirkadu ma dalbanayso in cashuurta iyo / ama wixii kale ee shaabad ah la bixin doono. Macmiilku waa inuu mas'uul ka yahay canshuur kasta iyo / ama waajibaadyo kale oo laga yaabo inuu ku soo galo marka la eego ganacsigiisa.
Ka hor inta uusan macmiilku bilaabin inuu ganacsi sameeyo, waa inuu helaa faahfaahinta dhammaan guddiyada iyo kharashyada kale ee uu macmiilku bixin doono. Haddii wax dacwad ah laguma sheegin shuruudaha lacagta (laakiin, tusaale ahaan sida faafinta faafitaanka), Macmiilku waa inuu codsado sharaxaad qoran, oo ay ku jiraan tusaalooyin ku haboon, si loo ogaado kharashyada noocan oo kale ah inay macnaheedu tahay shuruudo gaar ah
Shirkaddu ma siinayso Macmiilka talooyin maalgashi oo ku saabsan maalgashiga ama macaamilka suurtagalka ah ee maalgashiga ama samaynta talooyinka maalgelinta nooc kasta
Shirkaddu waxaa laga yaabaa in looga baahdo inay haysto lacagta macaamilka ee xisaabtan oo ka soocaysa macaamiisha kale iyo lacagta shirkadda ayadoo la raacayo xeerarka hadda jira, laakiin tani maaha inay ilaaliso dhamaystirka ilaalinta
Ganacsi ku saabsan Istaraatiijiyada Ganacsiga ee Ganacsi Online ayaa halis u ah
Haddii macaamiishu ay sameeyaan macaamilo nidaam elektaroonig ah, wuxuu la kulmi doonaa halista la xidhiidha nidaamka oo ay ka mid tahay guuldarada qalabka iyo software (Internet / Server). Natiijada nidaamka guul darradu wuxuu noqon karaa in amarkiisa aan la fulin sida waafaqsan tilmaamihiisa ama aan la fulin dhammaan. Shirkadu ma aqbali doonto wax mas'uuliyad ah marka laga hadlayo sida guuldaradan
Wadahadalka taleefanka ayaa la duubi karaa, oo waxaad aqbali doontaa qoraalkaas oo kale ah caddayn ku salaysan oo cadaynaya tilmaamaha
Ogaysiiskani maahan karo ama ma shaacin karo ama uusan sharxi karin dhammaan halista iyo dhinacyada kale ee muhiimka ah ee ku lug leh wax ka qabashada dhammaan qalabka Maaliyadeed iyo adeegyada maalgashiga